Opera Touch အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » ဆက်သွယ်မှုများ » Opera Touch: fast, new & modern web browser
ဆက်သွယ်မှုများ | 10.0MB
မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုံခြုံပြီးပုဂ္ဂလိကထိတွေ့မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော dot touch နှင့်အတူလှပစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော web browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသန်းနှင့်ချီသောပရိသတ်များက0မ်းသာပါသည်။ ၎င်းသည်သွားလာရင်းများအပေါ်လူများအတွက်တည်ဆောက်ထားပြီးလက်ငင်းရလဒ်များအတွက်လျှပ်စီးမြန်သောဝက်ဘ်ရှာဖွေမှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ Opera Touch ကိုအကောင်းဆုံး browsing အတွေ့အကြုံကိုရရန် install လုပ်ပါ။
Lightning Finding Find browser
B> Opera Touch သည် Android တွင်အမြန်ဆုံးမိုဘိုင်းဘရောက်ဇာဖြစ်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ Opera Touch browser ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဝက်ဘ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေဖို့ချက်ချင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အမြန်လှုပ်ရှားမှုခလုတ်ကိုသင်၏ browser screen တွင်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပြီးချက်ချင်းရှာဖွေမှုကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။
Opera Touch Browser သည်သင့်အားလုံခြုံစိတ်ချရသောနှင့်သင့်အားအများဆုံး privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပေးရန် Web Touch Browser တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ Inbuilt ခြေရာခံခြင်းကာကွယ်တားဆီးရေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုက 3rd ပါတီ၏ tracking cookies များကို tracking cookies များကိုအွန်လိုင်းတွင်လုံးလုံးလျားလျားနေရန်ကူညီသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်နေသည့်အချိန်တွင်သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
browsing for browsing
BR> Opera Touch Browser သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သော browsing အတွက် built-in blocker တပ်ဆင်ထားသည်။ ဖွင့်သောအခါသင်၏အော်ပရာစာမျက်နှာသည်0က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုအခြားမိုဘိုင်း browser များထက်0က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာများကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။
Opera Touch ကိုသုံးရန်သင်ရှာဖွေခွင့်ပြုသည် တစ် ဦး တည်းလက်ကိုအသုံးပြု။ ဝဘ်။ စံပြအညွှန်းနှင့်အမြန်လှုပ်ရှားမှုခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်သည့်အခါသင်၏ browser screen တွင် fab ကိုအမြဲတမ်းရနိုင်သည်။ သင်၏ချက်ချင်းရှာဖွေမှုကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ သင်၏လတ်တလော tabs များအတွက်၎င်းကိုသင်၏လတ်တလော tabs များအတွက်ကိုင်ပြီးပွတ်ဆွဲနိုင်သည်, သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ၏ browser နှင့်လက်ရှိ tab ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်သို့မဟုတ်မျှဝေနိုင်သည်။
ကိရိယာများအကြား seamless ဖိုင်မျှဝေခြင်း
သင်၏အော်ပရာကွန်ပျူတာ browser နှင့်သင်၏ desktop နှင့် mobile device များအစွန်အဖျားများနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖိုင်ဝေမျှခြင်းအတွက် Opera Touch ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏ဖုန်းကိုသင်၏ PC နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖိုင်များကိုမျှဝေရန်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမလွယ်ကူပါ။ Opera Desktop browser ကိုသာစတင်ပါ။ Opera Touch နှင့်အတူပြသသည့် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။ login, password တစ်ခုသို့မဟုတ်အကောင့်မလိုအပ်ပါ။ သင်လင့်များ, မှတ်စုများ, ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အခြားဖိုင်များကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်သို့ပေးပို့နိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်၏ desktop နှင့် mobile devices များအားလုံးပေါ်တွင်ပြသလိမ့်မည်။
1995 ခုနှစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတိုင်းတာ0က်ဘ်ကိုလူတိုင်းရှာဖွေနိုင်သည့်အတွေးအခေါ်အပေါ်နော်ဝေတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သော 25 နှစ်ကသန်းနှင့်ချီသောလူတို့သည်အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းတစ်ခုတွင်အင်တာနက်ကို0င်ရောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လူများအတွက်အင်တာနက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်သည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းဖြင့်သင်သည် https://www.opera.com/eula/mobile တွင် ENDER လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုသင်သဘောတူသည်
ဘာထူးသလဲ Opera Touch: fast, new & modern web browser
Android လိုအပ်သည်: Android 5.1 or later
(103145) Rate it
I using app
Ye Haute-Vienne Aung San Suu Kyi dan dapat pula dilaksanakan dengan telus adalah langkah pertama ialah memasukkan dan menghantar tarikh perjalanan anda di borang tempahan dalam talian kami. Ihave@yehtut@waewae. Ihave@yehtut@waewae. Ihave@yehtut@waeSan Suu Kyi dan dapat pula dilaksanakan dengan telus adalah langkah pertama ialah memasukkan dan menghantar tarikh perjalanan anda di borang tempahan dalam talian kami. Ihave@yehtut@waewae. Ihave@yehtut@waewae. Ihave@yehtut@waewae. Ihave@yehtut@waewae